သွေးအားနည်းခြင်း - အခြားသတိထားရမည့် လက္ခဏာများ | Bezzia
သွေးအားနည်းခြင်း- အခြားလက္ခဏာများ သတိထားသင့်သည်။
Susana godoy | 14/05/2022 14:00 | ရောဂါများ
ထိုသို့မှန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သွေးအားနည်းခြင်းကို တွေးတောသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။. သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ် လက္ခဏာများ ရှိသေးကြောင်း သင်သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို စာရင်းပြုစုခြင်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် မကြာခဏနည်းပါးသော်လည်း၊ အခြားအကြောင်းရင်းများကို မတွေးမကြောက်မီ ၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
သွေးအားနည်းရောဂါသည် အဖြစ်များဆုံး သွေးချိုရောဂါများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သွေးနီဥများသည် အောက်ဆီဂျင် သယ်ဆောင်ရန် မလုံလောက်ပါ။. ထို့ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ပထမဆုံးလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက ပိုအရေးကြီးတာတော့ရှိတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အရာအားလုံးကို ရှာဖွေပါ။
1 အသားအရေက ပုံမှန်ထက် ဖြူဖွေးနေမယ်။
2 ရေခဲသောက်ခြင်းသည် သွေးအားနည်းခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
4 စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးခြင်း။
5 လက်နှင့်ခြေအေးများသည် သွေးအားနည်းရောဂါ၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသားအရေက ပုံမှန်ထက် ဖြူဖွေးနေမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘာမှမလုပ်ဆောင်လိုသည့်အခါတွင် ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာတွင် ထင်ဟပ်စေနိုင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် လုံးဝမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအခြေအနေတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို သွေးအားနည်းရောဂါဟု သံသယဖြစ်စေနိုင်သည့် လက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုမှာ ပုံမှန်ထက်ပိုဖြူသော အသားအရေဖြစ်သည်။ အားလုံးထက်၊ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ အရေပြားက ပိုထိခိုက်လွယ်တာကြောင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ သိသိသာသာ ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်း အရောင်ထွက်နေတာ ရပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ တစ်ခုခုဖြစ်နေတာကို သိလာလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထွက်ရှာဖို့ သွေးစစ်တာနဲ့ တူတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ရေခဲသောက်ခြင်းသည် သွေးအားနည်းခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
တွေးကြည့်ပါ၊ တပ်မက်ခြင်းသည် ချိုသော သို့မဟုတ် ငန်သောအရာများအတွက် အမြဲတမ်း ဦးတည်သည်မဟုတ်။ ၎င်းတို့သည် အကွဲပြားဆုံးဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ ဤအခြေအနေတွင် ဤစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာပုံရသည်။ အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုမဟုတ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲ ရောက်နေပေမယ့် ရေခဲသေတ္တာထဲ ရေခဲသေတ္တာထဲ သွားချင်နေတယ်ဆိုရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင် တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းကို ကောင်းစွာမသိရသော်လည်း သွေးအားနည်းရောဂါနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့အတူ အညစ်အကြေးကို စားလိုသော တဏှာသည်လည်း ပေါ်လာနိုင်သည် ဟုလည်း ဆို၏။ မယုံနိုင်လောက်အောင်မှန်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောဂါလက္ခဏာစုအကြောင်းကို စဉ်းစားပါက ၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့် ပေါ်လာရသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေမရှိသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ဒိုပါမင်းသည် ဟန်ချက်မညီသောကြောင့် ကြွက်သားများကို မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဒါက လူတော်တော်များများကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအခြေအနေမှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းမှာ ဒီပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင် ဟုတ်တယ်၊ ခြေထောက်များတွင် ထူးဆန်းသော ခံစားချက်များ ပေါ်လာပြီး ၎င်းတို့ကို ရွှေ့ရန် တိုက်တွန်းမှုဖြင့် ပေါ်လာသည်။ဒါဆိုရင် သွေးအားနည်းရောဂါက သင့်ဘ၀ထဲကို ရောက်လာပြီဆိုတာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သံဓာတ်ချို့တဲ့နေလို့ပါ။ သို့သော် ထပ်မံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် သင့်ဆရာဝန်ထံသွားခြင်းကဲ့သို့ မည်သည့်အရာမှ မရှိဟု ကျွန်ုပ်တို့ အခိုင်အမာ ဆိုပါသည်။
စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ့ပါးခြင်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါက စိတ်မသက်မသာခံစားရပေမယ့် တခြားရောဂါတွေအကြောင်း မတွေးခင်မှာ သွေးအားနည်းရောဂါလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ မှ ဆင်းသက်လာသည် ဗီတာမင် B12 သို့မဟုတ် ဗီတာမင် C နှင့် ဖောလစ်အက်ဆစ်ပင် ချို့တဲ့ခြင်း။. ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးအမည်မှာ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အာရုံကြောစနစ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤဗီတာမင်မျိုးမရှိပါက အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာပြီး မှတ်မိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်နှင့်ခြေအေးများသည် သွေးအားနည်းရောဂါ၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာကတော့ ခြေလက်တွေ အမြဲအေးစက်နေရမယ်။. ဟုတ်ပါတယ်၊ သွေးအားနည်းရောဂါအကြောင်းပြောဖို့ အမြဲတမ်းဦးတည်နေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ သွေးနီဥတွေ နည်းပါးလာတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပြီး အဲဒီလို မယူဆထားတဲ့ တခြားသူတွေကို လျစ်လျူရှုပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အမြဲအေးနေမည့် လက် သို့မဟုတ် ခြေများကို မရောက်နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ရောဂါများ » သွေးအားနည်းခြင်း- အခြားလက္ခဏာများ သတိထားသင့်သည်။
ကလေးကို ခွက်တစ်ခုမှ သောက်တတ်အောင် သင်ပေးပါ။